android ဖုန်းများအတွက် Volumen ထိန်းချုပ်ရေး Plus အား | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Volumen ထိန်းချုပ်ရေး Plus အား
Volumen ထိန်းချုပ်ရေး Plus အား APK ကို
ကျနော်တို့ကအန်းဒရွိုက်အသံက settings ကိုအကြောင်းကိုသိကြသည့်အတိုင်း, သင်, Settings များသို့မဟုတ် Tools များမှပြီးနောက်ချိန်ညှိချက်များကိုသွားသင့်တယ် -> အသံ -> volume အ ... များလွန်းနေနှေးကွေးနေသေးတယ်ခြေလှမ်းများ။ သူများသည် developer များသင်တို့အဘို့မဟုတ်, သင်နှစ်သက်သောသူမြားအတှကျအကောငျးဆုံးဘာမသိရပါဘူး။ ယခုတွင်သင်သည်အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်နှင့်ပိုပြီး accessible.Volumen ထိန်းချုပ်ရေး Plus အားအဘို့ကြီးသောတိုးတက်မှုကအဓိကအားဖြင့် Android ထုတ်ကုန်အပေါ်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့လျှောက်လွှာ, ဖြစ်သည့်ဤလျှောက်လွှာကို Volumen ထိန်းချုပ်ရေး Plus အားနဲ့အသိပေးချက်ကိုဘားကနေစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် ပိုမိုလွယ်ကူ settings ကို။ ဒါဟာ android operating system ကိုတစ်ဦးအဖြည့်သည်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, သင်တဦးတည်းအတူတူ interface ကိုအလွယ်တကူပဲ6အသံအတိုးအကျယ်အမျိုးအစားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကို select မှအသုံးပြုသူများအတွက်သုံးအော်တိုလက်ဆောင်ရှိပါတယ်။
Volumen ထိန်းချုပ်ရေး Plus အားပြုကြအားလုံးသောအသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အကြောင်းကြားစာ bar မှာကြည့်ရှုလိုသည့်ညွှန်ကိန်းကို select ပေးနိုင်ပါတယ်သောအလွန်ကြီးစွာသောအသိပေးချက်များကို feature ပေးပါသည်။ သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဤသူအပေါင်းတို့သည်ညွှန်းကိန်းကဒီစမတ် feature အသစ်နှင့်အတူမြင်နိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Volume ကိုထိန်းချုပ်ရေးပေါင်းသင်အသံ, အရောင်အဝါ, ဘက်ထရီ, SD ကဒ်နှင့်ကိရိယာ၏ internal memory ၏ status customize နှင့်စောင့်ကြည့်ကူညီပေးပါမည်။ သင်တစ်ဦးပါရှိတစ်ချိန်ကသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရပါမည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအကြီးအမျှဝေဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့!
* အင်တာနက် & ACCESS_NETWORK_STATE:
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကြီးထွားဖို့ဆက်လက် 1 ပိုပြီးနောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကို join များမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကူညီဖို့, ဤလျှောက်လွှာကိုများအတွက် "Share" ကိုကျေးဇူးတင်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ "လိုပဲ" ရှိသည်နှင့် "+ 1500000" ပါဘူး။
လျှောက်လွှာ device ကို၏အသံအတိုးအကျယ်နှင့် Screen Brightness ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ခွင့်ပြုသည်။
အန်းဒရွိုက် စတင်. အခါအသံအတိုးအကျယ်ထိန်းချုပ်ရေး start ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါင်း။
Tags: Volume ကိုထိန်းချုပ်မှု, အသံ, အသံချဲ့စက်, အရောင်အဝါ, အသိပေးချက်များ, လူမှုကွန်ယက်များ, တိုးမြှင့်အသံ, ဘက်ထရီ, SD ကဒ်, internal memory ။
ပြုပြင်ရေး bug တွေ, လုံခြုံရေးဟာ android 7.0 နှင့် 7.1
1.96 ကို MB
တိကျသော Volume ကို (+ ...
Pro ကို Equality - ...